Sergio Ramos Oo Diyaar U Ah Inuu Ka Tago Real Madrid Kuna Biiro Manchester United.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Sergio Ramos oo diyaar u ah inuu ka tago Real Madrid kuna...
Sergio Ramos ayaa lagu soo waramayaa inuu isku diyaarinayo inuu si bilaash ah kaga tago Real Madrid xagaagan, waxaana uu doonayaa inuu u dhaqaaqo Premier League kooxda Manchester United .
34 jirkaan qandaraaskiisa Bernabeu ayaa dhacaya dhamaadka Juun, waxaana la fahamsan yahay in wadahadaladii heshiis kordhinta ee caasimada Spain ay burbureen.
Paris Saint-Germain ayaa si xoogan loola xiriirinayay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain, laakiin sida laga soo xigtay The Mirror , daafaca halyeeyga ah ma doonayo inuu u dhaqaaqo France.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Ramos uu sidoo kale durba iska diiday dalabyo qaali ah oo uga yimid Aasiya madaama uu doonayo inuu u dhaqaaqo Premier League, dookha koowaad ee daafaca dhexe ayaana ah Old Trafford.
Da ‘yarkii hore ee Sevilla ayaa wali ah shaqsi dhiirigalin u leh Madrid, isagoo dhaliyay seddex gool 18 kulan oo uu u saftay kooxda Zinedine Zidane intii lagu jiray ololihii 2020-21.
Ramos ayaa shabaqa soo taabtay 100 jeer 668 kulan oo uu u ciyaaray Los Blancos tartamada oo dhan, dhanka kale, wuxuu kula guuleystay shan horyaal oo La Liga ah iyo afar horyaal oo Champions League ah intii uu joogay Bernabeu.
United ayaa si xoogan loola xiriirinayay ciyaaryahanka reer Spain ka hor inta uusan saxiixin heshiis cusub oo Madrid ah bishii Ogosto 2015.
Previous articleGuardiola: Manchester City waxay u dagaallantay sidii xayawaan oo kale si ay u garaacaan Sheffield United.
Next articleFabinho oo seegi doona labada kulan ee soo socota Liverpool